Ny Center Software Ubuntu dia maniry ny hanaraka ny dian'ny Steam | Avy amin'ny Linux
Ubuntu Software Center dia maniry ny hanaraka ny dian'ny Steam
ny Mark Shuttleworth dia tompon'andraikitra amin'ny fanazavana amin'ny fihaonamben'ny Ubuntu Developers Summit (UDS) ao Budapest fa ny kinova Ubuntu manaraka dia tsy hitondra fiovana lehibe, ary kosa ho kinova evolisiona amin'ireo fisehoan-javatra vaovao nampidirina tao Natty. Anisan'ireo rindranasa hafa izay hahazo fanatsarana ny Ivotoerana Software. Fantaro ny fomba sy ny antony.
Ny Ubuntu Software Center dia iray amin'ireo fampiharana izay tsy dia nampiasaiko mihitsy. Indrindra satria tsy nahita tombony noho ny taloha sy ny lanja mavesatra indrindra izy. Ary koa, elaela vao nisokatra ny CSU. Tsy mampiasa Ubuntu intsony aho izao fa hitako fa nihatsara be ny CSU, ary toa te hanohy hanatsara izany hatrany izy ireo.
Hatramin'ny nisehoany tao amin'ny kinova Ubuntu 9.04 "Jaunty Jackalope" dia niova sy nivoatra ity sombin'ny rafitra miasa ity, nanampy ny fampiasa sy ny fanatsarana mba hanampiana, ambonin'izany rehetra izany, mpampiasa vaovao. Ny sokajy, ny sokajy, ny fanazavana, ny pikantsary, ary na ny fizarana rindrambaiko naseho na vaovao aza dia tafiditra tao. Ny fotoana fandefasana CSU dia nihena be ihany koa, ary ny fahamoran'ny fampiasana azy dia nahatonga azy io ho fitaovana mety amin'ny fametrahana programa izay tsy ho fantatra raha tsy izany.
Ny fivoaran'ity ampahany manan-danja amin'ny Ubuntu ity dia tsy tapitra ary ny mpandraharaha dia te hanome azy ireo fifandraisana ara-tsosialy sy mavitrika kokoa, mitovy amin'ny atolotry ny Steam avy amin'ny Valve. Tanjona ny famoronana vondrom-piarahamonina misy hevitra, horonan-tsary, fanehoan-kevitra, tsikera sns. ary ampahafantaro ny fanatsarana amin'ny fikarohana programa vaovao ary ataovy izay hahamety kokoa ny interface amin'ny fitaovana multi-touch.
Raha ny marina, fihetsika mirindra sy ilaina izany. Raha mieritreritra izany mandritra ny iray minitra isika dia mahatsapa fa ny iray amin'ireo tombony lehibe indrindra amin'ny rindrambaiko maimaimpoana dia ny fiarahamonina misy azy. Tsy mifarana amin'ny tontolon'ny programmer io, fa ao koa ny mpampiasa. Amin'izao fotoana izao, ny mpampiasa dia tsy afaka manampy ny hafa afa-tsy amin'ny forum, miara-miasa amin'ny fandikana antontan-taratasy sy zavatra maro hafa, saingy tsy afaka nanao zavatra ifotony izy ireo: maneho hevitra, mifidy ary mizara ny momba ny rindranasa ampiasain'izy ireo.
Raha mila fanazavana fanampiny, dia mamporisika anao aho hamaky ny Fanamarihana Ubuntu Developers Summit (UDS) vita ao Budapest.
loharanom-baovao: Phoronix & Bitelia
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Ubuntu Software Center dia maniry ny hanaraka ny dian'ny Steam
10 hevitra, avelao ny anao
Germail86 dia hoy izy:
Heveriko fa ny iray amin'ireo teboka malemy indrindra dia ny tsy fahafahan'ny fametrahana programa marobe miaraka amin'izay mety hatao amin'ny synaptika.
Valiny tamin'i Germail86
Marina izany. Tsy nieritreritra an'izany.
Fandraisana anjara tena tsara!
Izany dia zavatra mahazo ny hozatro ... tsy afaka manemotra ny fametrahana aorian'ny fisafidianana programa maromaro hapetraka. Amin'ny solosaina somary tranainy, tsy afaka mahita programa hafa hapetraka ianao raha mametraka hafa. Raha azo atao ny fametrahana ahemotra dia tonga lafatra
Valiny tamin'i Leillo1975
Raha ny marina amin'ny Synaptic koa, noho ny fianjerana. Ny Synaptic na ny terminal dia ny misintona sy mametraka ireo fiankinan-doha raha tsy maintsy omena fahafaham-po izy ireo. Raha tsy izany dia apetraho tsirairay. Tsy misy fametrahana miaraka miaraka amin'ny Windows, ohatra.
Ankehitriny, ao amin'ny foibe Ubuntu Software dia tsy azonao atao ny mampihemotra ny fametrahana azy, fa raha apetraka izy io dia azonao atao ny manohy mijery eo anelanelan'ny fampiharana, manisy marika hafa ary manangana ny filaharana fametrahana, rehefa vitanao ny iray dia apetraho ilay iray hafa. Mitovy amin'ny Synaptic.
Fantatro fa noho ny zava-misy fa ivon-toeran'ny rindrambaiko izy io fa tsy Manager Manager fotsiny. Manova betsaka ny fampiasa io.
Azo antoka fa tsara raha manana boaty fanamarinana "Mametraka farany" na zavatra toa izany.
Lahatsoratra mahafinaritra, Pablo ary nanazava tsara! Tsy misy isalasalana fa iray amin'ireo teboka Ubuntu izay manintona ahy indrindra.
Misaotra, Martin! Rehefa manana segondra fanampiny aho dia manoratra lahatsoratra amin'ny bilaoginao. 🙂
Eny ... ny marina dia toa tsy hitako fa lasa misy fiantraikany be loatra amin'ny fampiasana azy io ary mety ho zavatra tsara ho an'ny mpampiasa izany.
Tint2, tontonana miovaova be
Chromebook: fanadihadiana amin'ny antsipiriany ny filokana vaovao nataon'i Google